Esi emeghe njikọ na taabụ Safari ọhụrụ na ụzọ mkpirisi keyboard | Esi m mac
Bọchị ndị a anyị na-agba akaebe banyere mkparịta ụka gbasara Touch Bar, banyere ma ọ bụ teknụzụ na-agafe, ma ọ bụ kama ọ bịara ịnọ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchekwa oge na ụbọchị anyị taa, Touch Bar bụ ngwaọrụ agbakwunyere ga-eme ka ndụ anyị dị mfe, mana ka anyị ghara ichefu, ọ na-amanye anyị ibuli aka anyị na keyboard ma ọ bụ opekata mpe itinye ha dịka anyị dị mmara ahụ.
Kama, na mkpirisi keyboard, bụ ngosipụta zuru ụwa ọnụ, nke na-eme ka ọ dịrị anyị mfe ịrụ ọrụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na-akpaghị aka ma na-emekwa ka anyị rụọ ọrụ nke ọma na Mac anyị.
Otu ọrụ anyị kacha arụ kwa ụbọchị bụ nchọgharị, ọ bụ ya mere ndị mmepe ji gbalịsie ike iji mee ngwa nchọgharị kachasị na ahịa. Ọ bụ n'ihi nke ahụ ihe ọ bụla anyị mere na ihe nchọgharị anyị ga-adị gara gara ma rụọ ọrụ nke ọma na maka nke a, ụzọ mkpirisi keyboard ahụ na-enyere anyị aka imezu ọrụ ahụ na nkebi nke abụọ.
Anyị maara ụzọ mkpirisi keyboard kachasị na ihe nchọgharị anyị, mana e nwere ọtụtụ ndị ọzọ anyị na-amaghị. Ọzọkwa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla enwere ike ịhazi ya na ụzọ mkpirisi keyboard.
N'ọtụtụ oge, mgbe anyị na-eme nchọgharị na Safari maka Mac, anyị chọrọ ibe na-esote ibu na taabụ ọhụrụ. N'ụzọ dị otu a, anyị nwere ihu akwụkwọ dị ugbu a n'aka anyị iji laghachi ya ozugbo, dịka ọmụmaatụ iji nweta njikọ ọzọ, yana na taabụ dị iche ntinye ọhụrụ.
N'okwu a, ihe kachasị mfe abụghị ịpị bọtịnụ aka nri wee họrọ "njikọ mepere emepe na taabụ ọhụrụ", ma ọ bụrụ na ọ bụghị jiri ụzọ mkpirisi igodo ụzọ: jide igodo Cmd mgbe ịpịrị njikọ ya na òké ma ọ bụ trackpad.
Ihe kacha mma Apple nwere ike ime bụ ijikọ ụzọ mkpirisi keyboard na omume sitere na Touch Bar, nke mere na onye ọrụ ikpeazụ kpebiri usoro nke kachasị mma maka ọrụ ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Esi emeghe njikọ na taabụ ọhụụ Safari nke nwere ụzọ mkpirisi ụzọ
GPU ọhụrụ atọ sitere na AMD pụtara na koodu isi maka macOS Sierra beta 5. New Macs na anya?